تنزيل MyFish APK 2.6.0 للموبايل اندرويد برابط مباشر apk
المعلومات عن MyFish APK
مطوّر التطبيق SQUAR PTE LTD
تحميل MyFish APK للاندرويد برابط سريع .
لقطات الشاشة لـ MyFish APK
الوصف MyFish APK
تنزيل MyFish APK APK للموبايل اندرويد برابط مباشر MyFish APK مجاناً، تحميل MyFish APK من متجر بلاي تحميل برنامج MyFish APK .
နေ့စဉ် MyFish မှာ Log in ဝင်ရောက်ပြီး ကစားသူသန်းပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ အကောင်းဆုံး ငါးဖမ်းဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ MyFish ဂိမ်းမှာ ဝင်ရောက်ပြီး ရေသူမတွေ၊ ပင်လယ်နဂါးတွေကဲ့သို့ ဒဏ္ဍရီဆန်ဆန် ဖန်တီးမှုများစွာပါဝင်တဲ့ ကွဲပြားငါးမျိုးစိတ်တွေနဲ့အတူ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ငါးဖမ်းစွမ်းရည်တွေကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်မျိုးစိတ်တွေအားလုံးကို ဖမ်းပြီး ကိုယ့်အိတ်ထဲ ရွှေဒင်္ဂါးဖြည့်တင်းသံကို နှစ်ခြိုက်လိုက်ပါ။ MyFish က ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်စွမ်းရည်နဲ့ အကြားစွမ်းရည်တွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်ကြောင်း အသေအချာပါပဲ!
ပစ်ခတ်မှုလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ငါးတွေကို ဖမ်းနိုင်ဖို့ မီးပိုက်ကွန်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ device ကို ထိလိုက်ရုံပါပဲ။ Diameter အတွင်းရှိ ငါးတွေအားလုံးကို ဖမ်းနိုင်ပြီး ဒင်္ဂါးတွေကို ဆုလက်ဆောင်အဖြစ်ပြန်လည်ရရှိနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပါ။ တစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုင်းမှာလည်း သင့်တင့်မျှတတဲ့ဒင်္ဂါးအရေအတွက်ကို ကုန်ကျမှာပါ။ ဒင်္ဂါးတွေ ကုန်သွားလို့လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ဂိမ်းတွင်း Log in ဝင်ရောက်ပြီး နေ့စဉ်ဘောနပ်စ်တွေအဖြစ် ရွှေဒင်္ဂါးတွေကို အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ။
ဒါတွေအပြင် တစ်နာရီတိုင်းမှာ လက်ဆောင်ဘောက်စ်ကို စစ်ဆေးပြီး တကယ့်လက်တွေ့မှာ Telco ကတ်တွေနဲ့ လဲလှယ်ဖို့ ဂိမ်းတွင်းရွှေတွေကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ Myfish က သမုဒ္ဒရာတစ်ခွင်လုံးကို အနိုင်ယူပြီး တန်ဖိုးရှိဆုလက်ဆောင်တွေကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် MyFish ဂိမ်းက MyChat နဲ့ MyGame အတူတကွပေါင်းစည်းထားတဲ့ MySquar group ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ခုလည်းဖြစ်တာကြောင့် MySquar ရဲ့ အကောင့်တွေဖြစ်တဲ့ MyChat, MyID နဲ့ Facebook အကောင့်တွေကနေတစ်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
• စစ်မှန်တဲ့ ကစားရုံအတွေ့အကြုံ
• ဆန်းပြားလှတဲ့ 3-D ရုပ်ပုံတွေ
• နာရီတိုင်းမှာ အခမဲ့ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ
• VIP အခန်း
• နေ့စဉ် အခမဲ့ရွှေတွေ
MyFish 2.6.0 التحديث
المطور SQUAR PTE LTD
تحميل 10 Billion Husbands APK
تحميل Princess Salon Dress Up APK
تحميل Dress Up Cutie Girls
تحميل Basketball Dodge
تحميل Mech Battle
فقاعة مطلق النار لعبة مجانية APK
تحميل فقاعة مطلق النار لعبة مجانية APK
تحميل Tap Button
تحميل White Tiles4: Piano Master2APK